study support: isayikholojisti
Imvelaphi yegama elithi psychology
(1) Psychology -Igama elithi "Psychology" lisuselwa kumagama amabini esi "Greek" - Psycho kunye neLogos. KwisiGrike, intsingiselo ye "Psychi" -eMoya kunye neLogos - yi "Science". Ke eli gama linentsingiselo epheleleyo "yesayensi yomphefumlo". Oko kukuthi, "kulwimi lwesiGrike", thina mphefumlo kwisayikholoji
Inzululwazi yeentsingiselo zengqondo
(2) Psychology -Igama elithi Psychology libizwa ngokuba yi "Psychology" ngolwimi lwesiHindi. I-Psychology ibhekisa "kwisayensi yengqondo" okanye - "kwisayensi yemisebenzi yengqondo". Oko kukuthi, 'ukusebenza kwengqondo yisayensi elawulwa ziingqondo zethu, ingqondo. Intsingiselo yeli gama "psychology" ibonwe iguquka ngokuhamba kwexesha.
(3) Ukusukela kwi-tenure ukuya kwi-16th century - yabizwa ngokuba "yisayensi yomphefumlo". Abaxhasi bayo abakhulu - "uSocrates, uPlato, uAristotle, uRam, Hobbes, njl.
(4) Ukusukela ngenkulungwane ye-16 ukuya kwi-17, yabizwa ngokuba "yiSayensi yeengqondo okanye ingqondo". Abaxhasi bayo abakhulu - "uThomas, Reid, Locke njl.
(5) Ukusukela ngenkulungwane ye-17 ukuya kwinkulungwane ye-19 yabizwa ngokuba - "yiSayensi yeConscious". Abaxhasi bayo abaqinayo - "UWilliam James, Tichner, Jameslee - njl njl.
(6) Ukusukela ngekhulu le-19 ukuya kuthi ga ngoku "ixesha langoku" - lalibizwa ngokuba yi "Science of Behaviour". Umxhasi wayo osisiteji - ukuphela kuka "Watson".
Ilabhoratri yokuqala yePsychology
Ilabhoratri yokuqala yenzululwazi yezengqondo kumazwe aseNtshona yaqala ukusekwa ngu "William Wunt"
Ngokuka-Wilson, "ugqirha wezengqondo" - "Ingqondo ikho" kwinkqubo ye-limpic ngaphakathi kwengqondo.
Isifundo se "Western Psychology" saqala e-India malunga nama-20 (wenkulungwane yamashumi amabini).
Kwifilosofi yamaIndiya, kugxininiswa kwisifundo solwazi kunye ne-interdisciplinarity kwisayikholoji. Apho kugxininiswa kunikezelwa kwisifundo sesazela (ingqondo, ingqondo, ingqondo, ingqondo kunye nomphefumlo) njl. Ngaphantsi koku, indlela yokuziphatha ichazwa kwi "corpus ezine". Oko kukuthi, kuye kwagxininiswa ukuba kuqondwe kakuhle indlela yokuziphatha komntu kobu butyebi bane.
Obu buncwane bobane zezi zilandelayo -
U-Annamaya Kosha- Ngaphantsi kwe-Anmaya Kosha, i- "Gyanandris" kunye ne "Karma Indras" yemizimba yethu ifundiwe.
I-Pranmaya Kosh - Ngaphantsi kwe "Pranmaya Kosh" kwifilosofi yamaIndiya - "Umthambo womzimba" kunye "Prana Shakti" zifundwa ikakhulu.
(iii) UManumaya Kosh - Ngaphantsi kwefilosofi yamaIndiya - "ingqondo" yomntwana ifundwe phantsi "kukaManumaya Kosh"
(iv) UVigyanamaya Kosh - Ngokwefilosofi yamaIndiya - "uBulumko" bomntwana ubandakanyiwe phantsi kwe "Vigyan - Maya" Kosh.
Amanqaku esayensi yezengqondo
Qaphela- i-Psychology yisebe lefilosofi-ukusuka apho yahlukaniswa kuqala ngu "William James".
Ngokwe-Indian Psychology- Psychology yinzululwazi egcina amava afunyenwe "kwiimvakalelo zangaphandle" ezisezingqondweni zethu. Ngamanye amagama, amava anjalo akhuselekileyo engqondweni yethu - ingqondo - i-ego - umphefumlo njl njl. Iingcali zengqondo okanye abacinga ngeIndiya babize ingqondo "yengqondo yesithandathu".
Ingcali yeengqondo-Ngokuka Fechner - "Ufundo lwesaykholoji-kukuphuhliswa kweendlela zengqondo.
Ngokukagqirha wezengqondo uFied and Chugh - "I-Psychology inamanqanaba amabini- kuwo
Inqanaba lokuqala lizi - ukwazi ngelixa inqanaba lesibini lingenazinto- ngenxa yoko-uFry noChugh - okwabizwa ngokuba nguyise wesayensi eyaziyo nengazi nto. "